जोहन्सबर्गमा जेनिशा |
आगामी मंसिर २७ गते शनिबार दक्षिण अपि|mकाको जोहन्सबर्गमा आयोजना हुने वर्ष २००९ को विश्वसुन्दरी प्रतियोगितामा नेपाली सुन्दरी जेनिशा मोक्तानले प्रतिनिधित्व गरिरहेकी छिन् । प्रतियोगितामा सहभागी हुन एक महिनाअघि नै काठमाडौंबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी जेशिना जोहन्सबर्गमा निणर्ायक चरणअघि सम्पन्न हुने विभिन्न प्रतिस्पर्धामा सहभागी भैरहेकी छिन् ।
प्रतियोगिताको सहभागिताका लागि जेनिशा लन्डन हुँदै दक्षिण अपि|mका पुगेकी हुन् । जेनिशाले जोहन्सबर्गमा आयोजित ‘द मिस वल्र्ड टप मोडल’, ‘मिस वल्र्ड ट्यालेन्ट शो’, ‘मिस वल्र्ड बिच ब्युटी’ आदि प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाइसकेकी छिन् ।
तपाईंको शिक्षा अथवा जागिरका बारेमा केही बताउनुहोस् न ?
म बीबीए -बिज्नेस एड्मिनिस्ट्रेसन) की विद्यार्थी हुँ ।
तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने व्यक्तित्व ?
नेपालकी अधिवक्ता सपना प्रधान मल्ल तथा दक्षिण अपि|mकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला ।
« ब्लू फिल्म खेल्न नायिकालाई पचास लाखको अफर चुम्बनमा एक नम्बर »